မြန်မာ့အွန်လိုင်းအိမ်ခြံမြေ - သင့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျအိမ်ခြံမြေကိုရှာဖွေလိုက်ပါ
ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ ငှားရန်အိမ်ခြံမြေများ ကြိုပွိုင့်များ အဆောင်များ
အဆောင်အမျိုးအစား အားလုံး အမျိုးသားအဆောင် အမျိုးသမီးအဆောင် အိမ်ထောင်သည်အဆောင်
အဆောင်ပုံစံ အားလုံး Hall ထပ်ခိုး ခန်း အိမ်ထောင်သည် အိပ်ခန်း ၁ ယောက်အိပ်ခန်း ၂ ယောက်အိပ်ခန်း ၃ ယောက်အိပ်ခန်း ၄ ယောက်အိပ်ခန်း ၅ ယောက်နှင့်အထက် အိပ်ခန်း
ရန်ကုန်တိုင်းရှိရောင်းရန် မြေကွက်၊ ခြံကွက်များ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိငှားရန် မြေကွက်၊ ခြံကွက်များ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိရောင်းရန် ဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိငှားရန် ဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းများ
ဗိုလ်တထောင်လမ်းသွယ် (၄)လမ်းတွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေ (၅)လွှာတိုက်ခန်း ရောင်းမည်။
ပေအကျယ် (၁၀၀×၁၀၀) လုံးချင်း အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။
Sqft(630)Royal Thiri Condominium For Sale
𝟏𝐬𝐪𝐟𝐭 -𝟏𝟔𝟓,𝟗𝟎𝟗ကျပ်တည်း နဲ့ ရမယ့် 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐮𝐦
သူရိန်ရိပ်မွန် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာတွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်
အလံု ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆးရံုအနီးတြင္ ကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္
ၾကည္ျမင္တုင္ ကမ္းနားလမ္းမေပၚတြင္ ကားပါကင္ပါကြန္ဒိုအခန္းေရာင္းမည္
🙏 ရွှေပြည်သာစက်မူ့ဇုန် 🙏 နေရာကောင်းမြေကွက်ရောင်းမည်။
သိန်း ၉၈၀၀ ကျပ် ဖြင့် VIP ရပ်ကွက်မှ ရွှေနှင်းဆီခြံ​လေး
တစ်ပါတ်အတွင်း အကြည့်အများဆုံး ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
#အချက်အချာကျသောမြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော Lift ပါ (25 ပေ x ပေ 50) Penthouse (Mini Condo) အခန်းသန့် ရောင်း
975 သိန်း (ကျပ်)
မြောက်ဒဂုံ ဘေလီတံတားအဆင်း ၃၄ရပ်ကွက် ဦးဝိစာရကျောကပ်တွင် လုံးချင်းအိမ်ရောင်းရန်ရှိသည်။
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း| ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
23,000 သိန်း (ကျပ်)
(ညှိနှိုင်းဈေးရှိ) သံလျင် #ပန်းတောက်ဝါလမ်းရှိ (25 ပေ x ပေ 60) အိပ်ခန်း(၂)ခန်းပါသော လုံးချင်းအိမ် ရော
🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၁၀.ရပ်ကွက် မေတ္တာလမ်းမအနီး တိုက်ခန်း အသင့်ပြင်ပြီးရောင်း...🙏🙏🙏
610 သိန်း (ကျပ်)
MKT Condo ရောင်းမည်။
#မြောက်ဒဂုံ / ​တော်ဝင်လုံးခြင်းအိ...
လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်ရှိ ရှယ်ပြင်ဆင်ထားသော အလွှာနိမ့်တိုက်ခန်း ဈေးနှုန်းတန်တန်လေးဖြင့် အမြန်ရောင်းမည
445 သိန်း (ကျပ်)
အိမ်လှလှလေးတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အိုင်မြန်မာဟောက်(စ်)ဒေါ့ကွန်း မှာ အိမ်ရာချေးငွေ လျှောက်ကြစို့
အိမ်ရာချေးငွေ တွက်ချက်ရန် အိမ်ရာချေးငွေ လျှောက်ထားရန်
မြေအကျယ်ပေ(100 ×120) မြေကွက်ပေါ်တွင်ဆောက်ထား လုံးချင်းအိမ် အသစ်စက်စက် ငှားမည်။...
🇲🇲🏠 မြကန်သာအိမ်ရာထဲတွင် Condo Facility နှင့်ပြည့်စုံပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ဆောက်လုပ်ထားသော Grand မြ...
ရန္ကင္း ကေ်ာက္ကုန္းတြင္ မိသားစုေနရန္ေကာင္း ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္...
(9) မုိင္ ျပည္လမ္းအနီးတြင္ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္းငွားမည္...
🙏 ရွှေပြည်သာစက်မူ့ဇုန် 🙏 နေရာကောင်းဂိုဒေါင်ဌားမည်။...
Sqft (1800sqft ) 7th floor (A)Condo For Rent...
သိမ်ဖြူလမ်း ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် လူကြိုက်များသော WHITE CLOUD CONDO(နှစ်ထပ်) ငှါးရန်ရှိသည်...
တစ်ပါတ်အတွင်း အကြည့်အများဆုံး ငှါးရန်အိမ်ခြံမြေများ
#နိုင်ငံခြားသားများအတွက်အထူးသင့်လျော်သော #မရမ်းကုန်း_ကုန်းမြင့်ရိပ်သာတွင် ၂ ထပ်ခွဲ Rooftop ပါ လုံးချ...
$ 1,700 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
မြောက်ဒဂုံ 28ရပ်ကွက် အတွင်းလမ်းကျယ် 40*60=မြေပေါ်တထပ်တိုက်အဌားလေးပါ...
လှိုင်မြို့နယ် ဓမ္မသုခကျောင်းလမ်းရှိ Royal Thukha Condo အလွှာမြင့် for Rent...
Mini Market Store ဖွင့်ရန်နေရာကောင်းအခန်းကျယ်...
၁၂ပေခွဲ၅၀ ပထမထပ် တိုက်ခန်းအငှား...
စမ်းချောင်းမြို့နယ် ကြည်မြင်တိုင်ဘူတာအနီးရှိ တိုက်ခန်း ငှားမည်။...
(၅လွာ) ပုဇွန်ေတာင်ဥယျာဥ်အိမ်ရာ၊ လိပ်ကန်လမ်း၊ ေပကျယ်တိုက်ခန်း ငှားမည်...
ကမာရွတ် လှည်းတန်းအနီး ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းသွယ်တွင် လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။...
ရုံးခန်း​ရော အိမ်အဖြစ်ပါ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အငှား​​ပို့စ်​လေးပါ။...
မန္တလေးမြို့ ‘မသီ အိမ်ခြံမြေ’ ၏ပဲ့ကိုင်ရှင် ဒေါ်သီသီအောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း...
မန္တလေး အိမ်ခြံမြေ ဈေကွက် အခြေအနေ နှင့် iMyanmarHouse.com ဖြင့်လက်တွဲမှု မန္တလေးမြို့ ...
Customer တွေ တစ်နေရာတည်း စုံစုံလင်လင် သိရတာပေါ့...
အစ်မတို့ ပုံမှန်ဆို အရင် iMyanmarHouse.com မရှိခင်တုန်းက တစ်ယောက်ချင်း company တစ်ခုချင်းစီက...
iMyanmarHouse.com နဲ့ ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာ ထိရောက်စွာ client တွေရပါတယ် - Slade အိမ်ခြံမြေ...
iMyanmarHouse.com ကအရမ်းကောင်းပါတယ်။ အစ်မတို့ အခု Digital Platform ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ iMyanmarHouse.com...
IT ပိုင်းဆိုင်ရာမြင့်လာတဲ့ အခါမှာ iMyanmarHouse ပေါ်လာတာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် - မြန်မာ့မြေ......
“အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် iMyanmarHouse ကို၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အိမ်ခြံမြေ ကြော်ငြာတဲ့အခါ...
iMyanmarHouse.com နဲ့ လက်တွဲရတာ အမြဲတမ်း အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်ပြီး ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်...
[Unicode] “iMyanmarHouse ကိုအကုန်လုံးက သိကြတယ်လေ၊ လာမေးကြရင်လည်း iMyanmarHouse မှာတင်ထားတာလား ဝင်းသိ...
မြန်မာနိုင်ငံမှာ iMyanmarHouse က Top ပါလို့ Interview တွင်ဖြေကြားခဲ့တဲ့ အောင်ပြည်စိုး အိမ်ခြံမြေ......
တခြား website တွေလည်းရှိပါတယ် ဒါပေမယ့် iMyanmarHouse.com ကိုမမှီပါဘူး။ iMyanmarHouse.com က...
သန့်ရှင်းရေးပုံမှန်မလုပ်ရင် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာစေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ
ဝယ်ယူပြီး ချက်ချင်းနေနိုင်မည့် ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ Diamond Lotus ကွန်ဒိုအထူးပရိုမိုးရှင်း
5 May 2022 to6June 2022
ရန်ကုန် မြေကွက်တွေကို ဘယ်မှာမှ မရနိုင်တဲ့ (၁) ပေပတ်လည် ကျပ်ငွေ၂ သောင်းကျော်မှစတင် ဝယ်ယူနိုင်မည့်အခွင့်အရေး
iMyanmarHouse.com သည် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားရှိ မြို့ကြီး၊ မြို့ငယ်အသွယ်သွယ်မှ အိမ်ခြံမြေ ဝယ်ယူသူများ၊ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေရောင်းချသူများကို တစ်နေရာတည်းမှာ ချိတ်ဆက်ဆုံဆည်းပေးတဲ့ မြန်မာ့အကြီးဆုံးအိမ်ခြံမြေ အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုက် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအဝှမ်း ငှားရမ်းရန်အိမ် ၊ ရောင်းချရန်အိမ် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ ငှားရမ်းရန်အိမ် ၊ ရောင်းချရန်အိမ် ကြော်ငြာပေါင်း ၃၅၀,၀၀၀ (သုံးသိန်း ငါးသောင်း) ကျော်ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဝယ်ယူလိုသူနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူတွေအတွက် အသစ်ထွက်ရှိလာမည့်စီမံကိန်းများကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးထားခြင်း ၊ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းချလိုသူများနှင့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက် ထိရောက်စွာ ကြော်ငြာပေးခြင်း ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများအတွက် အထိရောက်ဆုံး ဈေးကွက်ချဲ့တွင်ရောင်းချနည်းများဖြင့် ကူညီရောင်းချပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ iMyanmarHouse.com သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ်တစ်လူသုံးအများဆုံးနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အိမ်ခြံမြေဝဘ်ဆိုက်အဖြစ် မြန်မာ့အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်လျှက်ရှိသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏာန်းများကို iMyanmarHouse.com တွင် အချိန်နှင့် တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
(တိုင်း/ပြည်နယ်အားလုံး - မြို့)
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
အလုံမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
လသာမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
အလုံမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
လသာမြို့နယ်ရှိ ရောင်းရန် လုံချင်းအိမ်များ
ပဲခူးတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
အလုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ ်ရှိငှားရန် တိုက်ခန်းများ
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
လသာမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများ
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
အလုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
လသာမြို့နယ်ရှိ ငှားရန် လုံချင်းအိမ်များ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် မြေကွက်၊ ခြံကွက်များ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုအခန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုအခန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန်နေရာများ
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်နေရာများ
သင်၏အချက်အလက်များအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိပြီး သင့်အနေဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းထားမှုကို အချိန်မရွေးပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈအျပည့္ရိွၿပီး သင့္အေနျဖင့္ စာရင္းေပးသြင္းထားမႈကို အခ်ိန္မေရြးပယ္ဖ်က္နိုင္ပါသည္။